Companieslọ ọrụ Shell Ọha na-ere - Ugbu A Njikere Ọha
Companieslọ ọrụ shei ọha maka ọrịre
Fastzọ kachasị ọsọ ma kachasị mfe iji were ụlọ ọrụ gị na ọha bụ ịzụta a ụlọ ọrụ shei ọha. Shelllọ ọrụ mgbasa ozi ọha bụ ụlọ ọrụ etinyerelarị na SEC iji ree ndị ọhaneze ihe ya. Anyị nwere otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị buru ibu nke ụlọ ọrụ shelf maka ire. You nwere ike ịnwe ụlọ ọrụ shei nke ọha ma ọ bụ ụlọ ọrụ agadi gị ka obere elekere 24.
You zachaa ụlọ ọrụ ngwa ahịa ọhaneze, a na-edobe akwụkwọ ma tinye akwụkwọ. Mgbe ị na-ejikọ ụlọ ọrụ nzuzo na ụlọ ọrụ ọha, ị ga-enwe aha nke azụmahịa dị ndụ. Akwụkwọ njikọ gị bụ ụdị iwu dị iche iche na-ejikọta ụlọ ọrụ abụọ gị, na-ahapụrụ gị ụlọ ọrụ iwu dị njikere ịre ahịa ya na ọha. Ọdịnaya dị ebe a bụ maka ebumnuche ọhụụ na nke mmụta. Offọdụ ụlọ ọrụ ndị edepụtara n'okpuru nwere ike ghara (ma) na-ere ahịa n'ihu ọha. A gaghị ele peeji a anya dị ka onyinye iji zụta ma ọ bụ ree nchedo. A na-ebugharị azụmahịa site n'aka ndị ọka iwu na ndị na-ere ahịa ikikere, dị ka iwu si chọọ, ọ bụghịkwa site na ụlọ ọrụ anyị. Chọọ ndụmọdụ enyere n'iwu na ụtụ isi enyere gị.
Companieslọ ọrụ na-ahụ maka shelf etoola - ụlọ ọrụ na LLC maka ọrịre
Polọ Ọrụ Agụmakwụkwọ Nevada
Corporationlọ ọrụ ụlọ ọrụ aka ochie na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke LLC
Companygwọ Ọrụ Shellọ Ọrụ Na-ahụ Maka Oge Azụ
Ajụjụ ụlọ ọrụ toro ogologo Ajụjụ
Ihe Nhazi ulo oru
Lọ ọrụ aka ochie na California
Ọzụzụ Agụmakwụkwọ Aki
Lọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ mgbe ochie
Shellọ ọrụ shelf na ụlọ ọrụ aka ochie
Companylọ ọrụ shelf
Iji gedlọ Ọrụ Azụma Aka Aka Akwụ Ego na Ebe E Si Nweta & Estlọ Ego Ego